Motorola Moto One ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain | Androidsis
Motorola Moto One ayaa yimid Spain
Eder Ferreno | | Motorola
Motorola Moto One waa taleefanka ugu horreeya ee Android One. Moodel si rasmi ah loo soo bandhigay dhammaadkii Ogosto, oo aad wax badan ka baran karto Halkan. Ka dib markii la shaaciyay, isticmaaleyaashu waxay sugayeen suuqgeeda. Haddana waa markiisii ​​Isbaanishka, halkaasoo aaladdu mar horeba si rasmi ah loo bilaabay.
Warqad ahaan waxaan ku aragnaa heer dhexdhexaad ah oo gaara la tartamaan moodooyinka sida Xiaomi Mi A2. Marka Motorola Moto One waxay ku socotaa qaar ka mid ah tartamayaasha quruxda badan. Laakiin taleefanku wuxuu awood u leeyahay inuu si fiican wax u iibiyo.
Kuwa xiiseynaya iibsashada taleefankan Spain ma sugi doonaan waqti dheer. Tan iyo markii lagu bilaabay dalkeenna durba waa rasmi, waad iibsan kartaa hada si rasmi ah. Waxaa lagu iibiyaa meelihii caadiga ahaa ee iibinta loogu talagalay taleefannada shirkadda, dukaamada jirka iyo khadka tooska ahba.
Marka, kuwa xiiseynaya Motorola Moto One waxay ka heli karaan dukaamada sida Amazon ama Mediamarkt, marka lagu daro Fnac iyo kuwa kaloo badan. Marka dhib kugu noqon maayo inaad ka hesho telefoonka meelaha iibka ee Spain.
Qiimaha Motorola Moto One waa 299 euro. Waa qiimo la aqbali karo oo loogu talagalay heerka dhexe ee fasalkiisa, in kasta oo ay macquul tahay inay taasi ka hor imaan karto. Maaddaama isticmaaleyaashu ay ku sharxi karaan noocyo ka jaban inta u dhexeysa, waxay sidoo kale isticmaalaan Android One.
In kasta oo Motorola ay ku guuleysatay inay ku laabato safka koowaad ee soosaarayaasha iyadoo sii kordheysa iibinta. Sidaas waa sidaas waxay u egtahay in Motorola Moto One uu ka caawinayo kororkaan iibka. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida macaamiisha Spain ay u helaan. Maxaad u maleyneysaa dhexdhexaadkan dhexdhexaadka ah ee leh Android One?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Motorola Moto One ayaa yimid Spain
Sida loo demiyo ogeysiisyada barnaamijka ee ku saabsan Android
Dib-u-soo-celin bilaash ah oo bilaash ah 'Pocket Invader' oo loogu talagalay Android-kaaga